Maitiro ekubvisa mavhairasi kubva kuMac yako | Nhau Gadgets
Maitiro ekubvisa mavhairasi kubva kuMac yako
Gadget nhau | 24/03/2022 12:40 | apuro
Senge chero komputa system, iyo Apple's operating system ine utera hwayo. Aya anoshandiswa nemavhairasi kuwana kombiyuta uye ane ruzivo rwakavanzika, semakadhi echikwereti kana ruzivo rwebhangi. Nguva zhinji, mushandisi haatomboziva nezve kuvapo kwehutachiona, sezvo maitiro ayo akanyarara uye ane parasitic.
Kana iri nyaya yako, tine nhau dzakanaka kwauri: kune nzira dzakati wandei dzekudzivirira Mac yako Nzira inonyanya kuzivikanwa ndeyekuisa chaiyo antivirus, kunyangwe paine dzimwe nzira dzekubvisa hutachiona kubva kuMac pasina chikonzero chekuziva zvakadzama kuti kodhi yayo yemukati inoshanda sei.
1 Chii chinonzi utachiona uye nei chakakosha?
2 Nzira yekubvisa sei mavhairasi kubva kuMac?
2.1 kutarisa kune zviratidzo
2.2 Bvisa software yakaiswa
2.3 Kuiswa kwesoftware yekudzivirira
Chii chinonzi utachiona uye nei chakakosha?
Vanozivikanwa se mavhairasi emakomputa kumapurogiramu anovharidzira mabasa echitsotsi, akadai sekuba zvitupa kana kuendeswa kubhangi. Saka, mavhairasi isoftware iyo kuiswa kwayo kunofungidzirwa, pasina mushandisi kuzviziva, kuwanikwa kwevanhu vasina mvumo kune ruzivo rwuri muPC.
Kunyangwe isu tichiwanzo taura nezvavo zvakasiyana, kune mavhairasi mazhinji anosiyana mumawo modus operandi. Kune zvese, iyo malware iwo anonyanya kushandiswa ne hackers kana cyber matsotsi. Mamwe eanonyanya kushandiswa malware kurwisa Macs iTrojans, ransomware, phishing kana adware. Mumwe nomumwe wavo anoshanda nenzira yakasiyana uye anowana data kuburikidza nenzira dzakasiyana.
Nzira yekubvisa sei mavhairasi kubva kuMac?
Mavhairasi mazhinji anowana mukana kune system nekuisa mamwe software. Zvakadaro, kune dzimwe nzira dzinoshandiswa nematsotsi kupinda muhurongwa; mameseji, maemail, malvertising ... Chero zvazvingava, kuwana malware kunogona kubviswa kana tine zvishandiso zvinodiwa.
Attention to ari zviratidzo
Kazhinji kazhinji, utachiona hunoramba husingaoneki uye huchiita sehusingashandi kwenguva yakati. Muchikamu chino, cybercriminals unganidza ruzivo rwakavanzika uye edza kuwana mimwe michina kuti uenderere mberi nekuita zvehutsotsi. Nechikonzero ichi, vanhu vazhinji havazive maMac avo ane hutachiona kusvika kwave kunonoka.
Zvimwe zve zviratidzo izvo Mac ane hutachiona anogona kuunza ndezvi: kurasikirwa kwekuita, kugadzwa kwezvishandiso zvitsva kuzvimiririra, kunonoka, matambudziko ekuchengetedza, kutumira maemail akawanda uye mameseji kune vanozivana... chero maitiro asina kujairika inofanira kuita kuti tifungidzire kuvapo kwechimwe chinhu chekunze.
Kudzima el yakaiswa software
Kana software yakaipa yakaiswa uye inowanikwa pane system, Apple inokurudzira chirongwa kubviswa uye kuitumira kumarara. Iyi nzira inogona kuitwa ne Apple mirayiridzo.
Kuiswa de software yekuchengetedza
Nekuda kwekuonekwa kwekutyisidzira paMac, kune akawanda makambani anotsaurira basa rawo kune Mac system kuwedzera uye kuchengetedza. Aya masoftware anodzivirira Mac uye anochenesa uye kubvisa zvirongwa zvavanofunga kuti zvinonyumwira. Nenzira imwecheteyo, vanoyambira nezve kuwana mapeji ewebhu ayo mabviro avasingaone seakavimbika, pamwe nemaapplication asina kuchengetedzwa kwakakodzera kweMac.
Pasinei neizvi, imwe malware inotora kutaridzika kwekuchengetedza software. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuenda kumapurogiramu anozivikanwa ane rekodhi rekodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » apuro » Maitiro ekubvisa mavhairasi kubva kuMac yako
ILIFE A11, imwe nzira ine akawanda maficha uye mutengo wakanaka [Ongororo]
Isu tatoziva zuva rekutanga uye mutengo weiyo Doogee S98 nyowani